श्रीमान साउदीवाट आएकै दिन पोइला भागिन् श्रीमति, त्यो पनि भाञ्जासँग, उनकै बहिनीले खुलाइन् यस्तो घिनलाग्दो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमान साउदीवाट आएकै दिन पोइला भागिन् श्रीमति, त्यो पनि भाञ्जासँग, उनकै बहिनीले खुलाइन् यस्तो घिनलाग्दो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमान साउदीवाट आएकै दिन पोइला भागिन् श्रीमति, त्यो पनि भाञ्जासँग, उनकै बहिनीले खुलाइन् यस्तो घिनलाग्दो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्)
admin January 31, 2020 January 31, 2020 भिडियो, समाज	0
माघ १७, काठमाडौं । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदीमा थिए । उनी जुन दिन घर फर्किए सोही दिन उनकी ३७ वर्षकी श्रीमती घर छोडेर हिडिन् । श्रीमान भिम नेपाली साउदीवाट काठमाडौं आइपुग्दा सम्म पनि उनको श्रीमती माया नेपालीसंग कुराकानी भइरहेको थियो । भिमले काठमाडौं स्थित विमानस्थलमा ओर्लिएपछि श्रीमती मायालाई फोन गरेर कहाँ छौ ? भनेर सोधे त्यतीबेला उनले आफु घरमै रहेको बताउँदै आएका थिइन् ।
ल आयो यस्तो श्रीमतिकाे खबरः श्रीमतिकाे कु’टाईबाट श्रीमानकै निधन… हेर्नुहाेस्
पहिले टिपरको ठक्कर दिएपछि ब्याक गरेर मनमायालाई किचेर मा’रेपछि…
काेराेना भाइरसकै कारण चिनिया प्रमीसँग विहे गर्न नपाएपछि यस्तो छ दुखेसो